» Journey-Assist - Yonke into oyifunayo kufuneka uhambe
Ngalo lonke ixesha elilungileyo lohambo Olungileyo
Ihlabathi / iiNgingqi
Umoya kunye neehotele
Wamkelekile kwi-portal yethu yokuhamba Journey-assist!
Umsebenzi wethu kukukunceda ekuququzeleleni ukuzimela hambo! Nokuba ngumsebenzi okanye iihambo zemfundo, ukhenketho olunomdla, ukhenketho lokuthenga, ukhenketho lweefoto okanye uhambe nje ngenjongo yokuphumla. Apha unokufumana lonke ulwazi oludingayo ukwenza oku. Ukuqala ukusuka iimephu ezisebenzayo kunye nomtsalane kunye nokuphela kwengcebiso kunye nokuhlolwa kwakhona kwabakhenkethi abanamava, kunye neengxelo zevidiyo kunye nevidiyo.
Kwakhona kwi-portal unokufumana isixa esikhulu solwazi oluncedo malunga namazwe amaninzi, izinto ezinomtsalane kunye nezinye izinto ezinomdla kuzo.
Ngokukodwa kunxibelelwano, i-portal ibonelela ngamathuba papasha amanqaku akho, yabelana ngeengcebiso zakho kunye nobomi bakho, shiya ingxelo yakho kunye namabali okuhamba.
Ulwazi lokuququzelela uhambo oluzimeleyo
Iindawo zokufikela ezithandwa kakhulu
Amanqaku apapashwe apha ibhalisiwe iindwendwe kwi-portal yethu. Ewe inqaku lakho okanye uphononongo lunokubonakala apha. Amanqaku abandakanya iingcebiso eziluncedo, iingcebiso, iinkcazo zeendawo ezinomdla, uphononongo kunye nezinto ezinjalo. Ewe kunjalo, ngaphambi kokuba kupapashwe, onke amanqaku amodareyithwa ngokubaluleka komxholo 🙂
Ukwenza upapasho lwakho, yiya kwiakhawunti yakho, okanye ucofe nje APHA 🙂
Indonesia iTshayina ESri Lanka
Cambodia Сингапур EJapan
Zonke iimpapasho malunga namazwe aseAsia
Imimandla emi-7 entle yaseTurkey
Imimandla emi-7 yeTurkey yeLizwe eliQinisekileyo iziqulatho iipesenti ezingama-97 zomhlaba omkhulu waseTurkey ulele eAsia, zineepesenti ezintathu zommandla wazo okwiSingasiqithi saseBalkan kuMazantsi mpuma Yurophu, zahlulwe kulo lonke ilizwe yiBosphorus, uLwandle lwaseMarmara kunye neDardanelles. I-Turkey ingumda weAegean, uLwandle oluMnyama kunye neMeditera kwaye inonxweme olude oluhle. Uninzi ...
Iilwandle ezili-10 ezilungileyo eTurkey
Iilwandle ezili-10 eziphezulu eTurkey Iziqulatho I-Turkey yindawo yamandulo yenkcubeko, yabantu kunye neendawo ezihlala kuzo. Ngempuma Yurophu kwelinye icala naseAsia kwelinye icala, iTurkey ibumbe imbali yayo ende iphantsi kobukhosi, ubudlelwane bezenkcubeko kunye neendlela zorhwebo ezihamba ngayo. Ukuma kwayo kwendalo kunye nonxweme ...
Ezona ndawo zibalaseleyo ze-10 zeIstanbul ikarikuni
Ezona ndawo zibalaseleyo ze-10 zeIstanbul I-Turkey Uluhlu lweZiqulatho Istanbul sisixeko esihle ekulondolozeni inkcubeko kunye nembali, esidibanisa kwisixeko esinomdla esinezinto ezininzi zokubonelela abahambi abavela kwihlabathi liphela. Eyilwe ngexesha le-Neolithic, i-Istanbul namhlanje sisixeko sanamhlanje esihlala sinyanisekile kwilifa laso lembali ngokusebenzisa ii-mosque, ii-basilicas kunye ...
Iziqithi ezili-10 ezinkulu e-Indonesia
Iziqithi ezili-10 ezinkulu zaseIndonesia Uluhlu lweziqulatho I-Indonesia lelona qela likhulu ehlabathini, lingabikho kwiziqithi ezingama-17 ezigqunywe ngamahlathi kunxweme lwaseAsia. Iziqithi ezihlanu zithathwa njengezona zibalulekileyo ngenxa yobukhulu bazo obukhulu, ngelixa ezinye zahlulwe phakathi kweziqithi ezingama-000 ezincinci zaseIndonesia. Ndikwazisa iziqithi ezili-30 ezinkulu e-Indonesia. Shumi …
Iilwandle ezili-10 ezilungileyo kwisiqithi saseLombok eIndonesia
Iilwandle ezili-10 ezilungileyo eLombok Island eIndonesia Iziqulatho Abahambi beza eLombok ngezizathu ezininzi. Banokufuna ukuphonononga indalo okanye bafunde okungakumbi malunga nesi siqithi sihlala amaSilamsi. Abanye bafuna ukubona ezinye zezona zilwandle zibalaseleyo zaseLombok, ukuthambeka kwelanga, kunye nokuthengiswa kwe-snorkelling, ukuntywila kunye nokusefa. Nantsi lapho ...
Iziqithi ezili-10 ezilungileyo e-Indonesia
Iziqithi ezili-10 zeZiqithi eziPhambili zaseIndonesia Iziqulatho i-Indonesia imi phakathi kweLwandlekazi lwaseIndiya kunye nePasifiki nangasentla kweikhweyitha. Eli lizwe lahlukileyo lineziqithi ezingaphezu kwe-17 ezahlukeneyo. Ezona ziqithi zidumileyo ezinje ngeJava, iSumatra kunye neBorneo zezinye zezona zikhulu emhlabeni, kodwa ezincinci kufuneka zilandelwe. Nangona kungenjalo…
Ukuhamba ngeenxa zonke eYurophu
EUnited Kingdom Ukraine Republic yaseCzech
Spain EMontenegro Poland
Zonke iimpapasho malunga namazwe aseYurophu
Izimangaliso ezisixhenxe zeGrisi yakudala
7 Izimangaliso zeGrisi yakudala Iziqulatho Kuzo zonke izakhiwo zakudala ezimangalisayo eGrisi, zimbalwa kuphela ezisindileyo ukuza kuthi ga kulo mhla, ngelixa ezinye zithe shwaka ngokupheleleyo ekubonakaleni ngenxa yentshabalalo ngenxa yeentlekele zendalo okanye abantu ngokwabo. Nokuba kukwizakhiwo ezisindileyo, ezinye iindawo zitshatyalalisiwe ngokuyinxenye okanye zitshatyalaliswe ngokupheleleyo.
Iindawo ezili-10 ezithandwa kakhulu ePoland
IPoland I-10 yeZona ndawo ziDumileyo kuLuhlu lweZiqulatho IPoland iye yasinda kwiinkulungwane zongquzulwano kwaye ikhule yaba lilizwe elizimeleyo elizingcayo elilungele ukuthatha indima entsha kwimbali yanamhlanje. Iindwendwe zasePoland zifumanisa into eyaziwayo ngabantu balapha ixesha elide: IPoland lilizwe elinenkcubeko etyebileyo, imihlaba emihle kunye neendawo zembali ezingaqhelekanga. Nokuba uyaphanda ...
Iindawo ezininzi zeholide ezingaphantsi kweGrisi
Uninzi lweeNdawo zokuHlala eziNgaphantsi komhlaba eGrisi Iziqulatho IGrisi yaziwa ngokuba sisiseko sempucuko kunye nedemokhrasi, singasathethi ke ngeMidlalo yeOlimpiki eyaziwayo. Yeyona ndawo ithandwayo yabakhenkethi eneendawo ezininzi ezaziwa kakhulu njengeSantorini kunye neAthene. Ngelixa ezi ndawo zeholide zigcwele izinto ezimangalisayo ukuzibona kunye ...
I-Kirillovka. Ukuphumla kuLwandle lweAzov. Yukreyini
I-Kirillovka. Ukuphumla kuLwandle lweAzov. I-Ukraine Itafile yokuqulathiweyo Kwisakhelo seemeko kwihlabathi lokuhamba, lixesha lokuba ujonge ngakumbi amazwe esihlala kuwo, endaweni yokuphupha malunga nokuba ungafumana phi ngoku akunakwenzeka.Kubemi baseUkraine, umzekelo, kukho uLwandle oluhle lwaseAzov! Kwaye ukuba uza ujonge kuye ngaphakathi ...
Iziqithi ezili-10 ezinkulu eGrisi
Iziqithi ezili-10 ezinkulu eGrisi Uluhlu lwemixholo Kunzima ukuchaza ngokuthe ngqo ukuba zingaphi iziqithi ezichithachithekileyo eGrisi. Iingcali zejografi ziqikelela ukuba zingabakho phakathi kweziqithi ezili-1200 6000 nama-XNUMX ezahlukahlukeneyo. Nangona kunjalo, uninzi lwazo lincinci kwaye luhleli lungahlali bantu kwiinkulungwane ezidlulileyo. IGrisi ilikhaya lamaqela eziqithi, uninzi lwazo luseAegean kwaye ...
I-7 intle mpuma yeAegean iziqithi. Grisi
I-7 iziqithi ezisempuma mpuma zoLwandle iAegean. IGrisi Iziqulatho Umntla-mpuma weAegean Islands, ethe saa kunxweme lweAegean lwaseAsia Minor, yenza iziqithi ezibukhali. Ezi ziqithi, ezona ndawo zikude kwiziqithi zaseGrisi, zinokufikeleleka kuphela ngolwandle okanye ngomoya kwaye kufanelekile. Ezi ziqithi zibalasele ...
EKenya Namibia ETanzania
Zonke iimpapasho malunga namazwe aseAfrika
Iindawo ezili-10 eziphezulu eMorocco
Iindawo ezi-10 eziPhambili eMorocco Iziqulatho u-Humphrey Bogart no-Ingrid Bergman banokuthi banike umhlaba iCasablanca, esona sixeko sikhulu kweli lizwe, kodwa iMorocco inokuninzi ukubona ngaphaya kwesi sixeko sizukileyo. Le ndawo yayiyifoloni yaseFrance inika abahambi ithuba lokuntywila kubomi beenkcubeko zakudala zama-Arabhu kunye nee-Berber, ilanga elunxwemeni ...
Iindawo ezili-10 ezigqwesileyo zaseMorocco kunye neendawo ezibalaseleyo - i-TripAdvisor
Ezona ndawo ziphambili zili-10 eMorocco kuLuhlu lweZiqulatho Unxweme lwaseMorocco kunye nembonakalo yomhlaba enomdla, enamabhishi amade, amazibuko okuloba anqatyisiweyo, iindawo ezintle kunye neeNtaba zeAtlas ePhakamileyo, zinokuba nomdla kubahambi. Yongeza koku izixeko zobukhosi zaseFez, iMeknes neMarrakesh, kunye nemizekelo yazo emihle yoyilo lwangaphambili lwamaSilamsi, kwaye wena ...
Iilwandle ezili-10 ezilungileyo eMorocco
Iilwandle ezili-10 eziphezulu zaseMoroccan Uluhlu lweZiqulatho Unxweme lwaseMorocco luhamba ngakuLwandlekazi lweAtlantic ngasentshona kunye noLwandle lweMeditera ukuya emantla, oko kuthetha ukuba kukho inani elikhulu lamalwandle onokundwendwela kwaye wonwabe. Zininzi iindawo ezintle zokundwendwela emanzini kunye nabathandi bamanzi, kodwa hayi ...
10 ezona tempile zamandulo zase-Egypt
10 ezona tempile zamandulo zase-Egypt Imixholo yase-Egypt Imbali yoyilo lwase-Egypt yamandulo ibuyela umva kumawaka eminyaka. Iitempile zokuqala zase-Egypt zazakhelwe embindini we-4 yeminyaka ye-BC kwaye zazizizakhiwo zengcongolo kuphela. Itempile yokugqibela, eyayisetyenziswa ngama-Egypt amandulo ngeenjongo zayo, yayisebenza njengetempile kude kube yinkulungwane yesi-6 yethu ...
Iindawo ezili-10 ezilungileyo zokutyelela eNamibia
Iindawo ezili-10 eziphezulu zokundwendwela eNamibia Iziqulatho UMzantsi-ntshona Afrika ulikhaya laseNamibia, ilizwe elalisakuba lithanga laseJamani elafumana inkululeko ngo-1990. INamibia yaziwa ngokuba ngumzi mveliso wedayimani kunye nenkcubeko yokutshica, kunye nenani elimangalisayo lokutsala kwendalo. Ukuba umbono wakho weholide yephupha uquka iindawo ezininzi ezisebenzayo ...
Ukuhamba eMzantsi Melika
Iindawo ezi-5 ezintle zaseBrazil
Imimandla emi-5 emihle yeBrazil Itheyibhile yokuqulathiweyo I-Brazil yingxilimbela yo Mzantsi Melika. Lelona lizwe likhulu kwilizwekazi kunye nelizwe lesihlanu ngobukhulu emhlabeni. Likhaya kwezinye zezona zixeko zidumileyo nezidumileyo emhlabeni; njengeRio de Janeiro, kwaye wonke umntu unokuyicinga le dolophu idumileyo yonxweme. 5 intle kakhulu ...
Iindawo ezili-10 ezigqwesileyo zaseBolivia kunye neempawu zomhlaba-kwi-TripAdvisor
Ezona ndawo ziphambili zili-10 eBolivia zoluhlu lweZiqulatho IBolivia lelinye lawona mazwe aphakamileyo nakwezona ndawo zikude emhlabeni, uninzi lwazo oluhlala lungafakwanga lixesha. IBolivia likhaya kubantu abaninzi bomthonyama kunalo naliphi na elinye ilizwe eMelika. Kubakhenkethi, iBolivia ibonelela ngemixube eyahlukeneyo yamava enkcubeko yezizwe ngezizwe, iindawo ezintle zendalo kunye nokuzonwabisa okugqithileyo. Ndiyacinga ...
Iindawo ezili-10 ezilungileyo zokutyelela e-Ecuador
Iindawo Ezilishumi Eziphezulu Zokundwendwela e-Ecuador Ebizwa emva kwe-Equator ebaleka kwilizwe liphela, i-Ecuador lilizwe elinikezela ngento kumntu wonke. Iqala ngewaka elinesiqingatha seekhilomitha zonxweme ngamanxweme amahle, ukusuka apho ukuya kwiiAndes kunye namahlathi emvula aselona mlambo uqukuqela ngokugqibeleleyo emhlabeni ...
Ukuhamba kuMbindi nakuMntla Melika
Iindawo ezili-10 eziphezulu zeBelize
Eziphezulu ezili-10 zaseBelize zoKhenketho kuLuhlu lweZiqulatho Khawufan 'ucinge ilizwe elinamabhishi ashushu, iingqaqa zekorale, imiqolomba, izilwanyana zasendle ezingaqhelekanga kunye ne-Caribbean vibe ebuyileyo. Kwaye ngaselunxwemeni lweli lizwe kungumqobo wesibini ngobukhulu emhlabeni, kwaye amabhodlo eetempile zakudala athe saa kulo lonke ihlathi lawo. Ukuba ucinga ukuba ilizwe elinje ...
Iindawo ezili-10 ezithandekayo eCosta Rica
Ifakwe phakathi kweNicaragua nePanama, iCosta Rica inezona ntyatyambo ziphambili kunye nezilwanyana, ukongeza kubume beentaba, iintlambo, amahlathi, iintaba-mlilo, iilwandle, amachibi kunye nemilambo. Ukuhamba kwayo kushiya kungekho mntu ungakhathaliyo.Nalu ulinganiso lwam lwe-10 elinomdla kakhulu ...
Ukuhamba e-Australia nase-Oceania
I-12 yamachibi amahle kakhulu eNew Zealand
12 yamachibi amahle kakhulu eNew Zealand Uluhlu lweziqulatho ZikuLwandlekazi lwePasifiki kumazantsi mpuma eOstreliya, iNew Zealand ineziqithi ezibini eziphambili kwaye idume ngeentaba zayo eziphakamileyo kunye neendawo ezintle zendalo. Uninzi lomhlaba kwezi ziqithi ngumhlaba weepaki zesizwe, ngakumbi kwiSouth Island, apho phantse lonke unxweme olusentshona ...
30.10.2020 / Inkumbulo / EOstreliya naseOceania, ENew Zealand / Izimvo kumachibi ali-12 amahle eNew Zealand akukho
Uhambo oluhle lweentsuku ezisi-7 ukusuka eQueenstown Nyu Zilend
Uhambo oluhle lweentsuku ezisi-7 ukusuka eQueenstown Uluhlu lweZiqulatho laseNew Zealand iQueenstown yidolophu encinci ekuchithelwa kuyo iiholide eNew Zealand ebekwe kunxweme lweLake Wakatipu kunye neembono ezintle zeentaba ezigqunywe likhephu. Kungekudala, yayisaziwa njenge-ski resort, kodwa ngoku imeko itshintshe kakhulu ...
29.10.2020 / Inkumbulo / EOstreliya naseOceania, ENew Zealand / Izimvo kuhambo oluphezulu lweentsuku ezisi-7 ukusuka eQueenstown. Nyu Zilend akukho
Iindawo ezili-16 ezintle zaseNew Zealand
Imimandla eli-16 e-New Zealand Uluhlu lweziqulatho Elinye lawona mazwe mahle emhlabeni, iNew Zealand e-Oceania igcwele umtsalane wendalo omangalisayo. Iintaba-mlilo ezininzi kunye neencopho zeentaba zenyuka ngaphezulu konxweme olude oluhle olunentili echumileyo, amachibi aqaqambileyo nemilambo echaza lo mhlaba usikelelweyo.
29.10.2020 / Inkumbulo / EOstreliya naseOceania, ENew Zealand / Izimvo kwimimandla eli-16 ethandekayo eNew Zealand akukho
Izinto ezili-10 ezimnandi zokwenza eNapier. Nyu Zilend
Izinto ezili-10 ezimnandi zokwenza eNapier. Iziqulatho zaseNew Zealand Iziqulatho Idolophu encinci yeNapier kwiSiqithi esikuMantla, esikunxweme olusempuma yeNew Zealand ejonge kuLwandlekazi lwePasifiki, yindawo entle kakhulu nenomdla wokuzonwabisa. INapier, ekwabizwa ngokuba yi "Art Deco Capital yeHlabathi", izele zizakhiwo ezintle ezibonisa uhlobo olwahlukileyo lobugcisa; Kaninzi ...
27.10.2020 / Inkumbulo / EOstreliya naseOceania, ENew Zealand / Izimvo ukurekhoda izinto ezili-10 ezinomdla zokwenza eNapier. Nyu Zilend akukho
Izinto ezili-9 ezilungileyo zokwenza kuNelson. Nyu Zilend
Izinto ezili-9 ezilungileyo zokwenza kuNelson. Itheyibhile yaseNew Zealand Iziqulatho zimi kunxweme olubukekayo lweGulf of Tasman, isixeko saseNelson sikwindawo entle ngokumangalisayo yaseNew Zealand, ejikelezwe ziipaki zesizwe ezintathu ezimangalisayo. Indawo yokuhlala endala elizweni, esi sixeko sasekwa ngo-1841 yi-Lord Admiral Nelson, ethiywa ngaye. Isixeko, ngesiteketiso sothando ...
27.10.2020 / Inkumbulo / EOstreliya naseOceania, ENew Zealand / Izimvo kwizinto ezi-9 eziphezulu zokwenza kuNelson. Nyu Zilend akukho
Uhambo lweentsuku ezili-9 ezilungileyo ezivela eAuckland. Nyu Zilend
Uhambo lweentsuku ezili-9 ezilungileyo ezivela eAuckland Iziqulatho zaseNew Zealand IAuckland, esona sixeko sikhulu eNew Zealand, kuninzi esinokukunika. Likhaya lelona lizwe likhulu labantu basePolynesia. Yakhelwe kumhlaba osetyenzisiweyo we-basalt volcano - kuphela kwesixeko emhlabeni. Ineemyuziyam ezigqwesileyo, olona lwandle lukhulu kumazantsi e-hemisphere kunye ...
27.10.2020 / Inkumbulo / EOstreliya naseOceania, ENew Zealand / Izimvo Ukuya kuhambo lweentsuku ezili-9 ezilungileyo ezivela eAuckland. Nyu Zilend akukho
Ukuhamba e China
Iipaki ezili-12 zelizwe elihle eChina
Iipaka zelizwe ezili-12 ezintle zase China Itheyibhile yomxholo Iipaki zikazwelonke mhlawumbi ayisiyiyo into yokuqala ethi qatha engqondweni yakho xa ucinga ngeTshayina. Nangona kunjalo, eli lizwe lineepaki zesizwe ezizodwa ezingaphezu kwe-200. Kwiminyaka yakutshanje, urhulumente wase-China wenze iinzame zokwenyani zokwandisa inkqubo yeepaki zesizwe. Ngokukodwa ukubuyekeza ungcoliseko, ...
Iindawo ezili-10 ezimangalisayo kwimpuma yeChina
Iindawo ezi-10 eziphambili zeyona ndawo imangalisayo eMpuma China Iziqulatho zeMpuma China lilizwe lazo. Inembali etyebileyo, ezinye izixeko zingaphezulu kweminyaka engama-6000 ubudala. Ukutyhubela iinkulungwane, impuma ye-China idale umoya othobayo kunye nokuhlaziya umphefumlo. I-Mpuma ye-China iyazikholisa zonke izivamvo zakho: ukusuka kwiidolophu zamanzi ezintle, eziwele imijelo ezaliswe kukuhamba kancinci ...
Iindawo ezili-10 ezimangalisayo kumantla e-China
Ezona ndawo ziphambili zili-10 zeyona ndawo imangalisayo eMntla China Uluhlu lwesiqulatho IRiphabhlikhi Yabantu base China lilizwe elikhulu kwaye lahlukile. Ngenxa yobukhulu bayo, akunakwenzeka ukuyibona yonke kuhambo olunye, kodwa kukho izinto ezinomdla kwilizwe liphela. I-China yase-China lolona khetho lubalaseleyo kubahambi-bokuqala.Mantla e-China kulapho uya kufumana khona ...
Iindawo ezili-10 ezimangalisayo kumazantsi e-China
Iindawo ezi-10 eziMangalisayo eMazantsi e-China Iziqulatho I-China kunye ne-United States zigubungela phantse umhlaba olinganayo, kodwa i-China likhaya phantse kubantu abaliwaka lezigidi. Ukuhamba kweli lizwe likhulu kunokuba lucelomngeni. Kodwa iya kulunge ngakumbi ngakumbi ukuba phantsi kwemiqathango ukwahlula eli lizwe libe ngamacandelo amancinci ngokwe ...
Iinyani ezingaziwayo malunga noDonga oluKhulu lwase China
Iinyani ezingaziwayo malunga noDonga oluKhulu lwase China Great Wall yase China. Esinye seMimangaliso eNtsha yeLizwe i-Great Wall yase China, efakwe kuluhlu lweZimanga ezisixhenxe zeLizwe, sesinye sezona zikhumbuzo zidumileyo emhlabeni, kodwa zisenokubakho izinto ezimbalwa ongazaziyo okwangoku. e…
Sihamba sinqumla iRussia, iUkraine, iBelarus
Kufuneka wenze ntoni eOmsk. Rhashiya
Kufuneka wenze ntoni eOmsk. I-Russia Itheyibhile yokuqulathiweyo ERussia, kwinxalenye esemazantsi eNtshona Siberia, kwindibano yoMlambo i-Irtysh kunye nomjelo wayo wasekunene, obizwa ngokuba yi-Om, isixeko sase-Omsk sime kakuhle.Ukuhlala eNtshona Siberia, ukhetho lokuthenga indlu e-Omsk yeyona nto inomdla kakhulu. Kuba isixeko ngokuqinisekileyo kufanelekile ...
Ukuphumla eCrimea Iziqulatho Dibana - eCrimea! Yintoni into yokuqala ethi qatha engqondweni yakho xa ucinga ngendawo onokuchitha kuyo iholide yakho? Ewe iCrimea, yintoni iCrimea? Okokuqala, iCrimea yimbali etyebileyo kunye nesiganeko. AmaGenesis, amaGrike, amaTatar, amaRashiya, amaUkraine. Oku kuthetha ukuba kukho umkhondo wembali - iinqaba, iinqaba, izindlu zoonongendi, ...
Idolophana yase-Dzhubga. Ummandla waseKrasnodar. Rhashiya
Idolophana yase-Dzhubga. Ummandla waseKrasnodar. IRashiya Iziqulatho Amagqabantshintshi ngokufutshane Ndifuna ukukuxelela malunga nelali eyaziwayo yase-Dzhubga, nangona incinci kakhulu, ibekwe kakuhle kakhulu, kumlomo opholileyo womlambo wegama elifanayo, elingena kuLwandle oluMnyama. Kwenzekile ukuba abo bahamba besiya kuLwandle oluMnyama ecaleni kwendlela u-M-4 badlula kule lali, ngokungathi bacoca isihluzi. ...
Iziqithi ezi-7 ezingaqhelekanga zaseNusa Tengara. Indoneshiya
Iziqithi ezi-7 ezingaqhelekanga zaseNusa Tenggara. I-Indonesia Iziqulatho Amakhulu eziqithi ezisempuma yeBali, eyaziwa njengeNusa Tenggara, yindawo yokundwendwela ehambela phambili kwimpuma ye-Indonesia. Ezinye iziqithi ziqhayisa ngala mabhishi mahle atsala iindwendwe kummelwane wabo waseBalinese ...
25.09.2020 / Inkumbulo / Asia, Indonesia, Ukujikeleza iBali / Izimvo ukurekhoda iziqithi ezisixhenxe ezingaqhelekanga zaseNusa Tengara. Indoneshiya akukho
Iziqithi ezili-10 ezintle kakhulu kufuphi neBali
Ezona ziqithi zihle zaseBali Iziqulatho IBali, ekwabizwa ngokuba sisiQithi soothixo, yeyona ndawo yokuhamba ithandwayo eIndonesia. Ukudibanisa imbali engakholelekiyo kunye nenkcubeko yokomoya exotic, iBali inento kuye wonke umntu otyelelayo. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, isiqithi sihle ngokwenene, sinayo yonke into ...
25.09.2020 / Inkumbulo / Asia, Indonesia, Ukujikeleza iBali / Izimvo kwiziqithi ezili-10 ezintle kufuphi neBali akukho
Iihotele ezili-10 eziBalaseleyo eBali
Iihotele ezili-10 eziphezulu eBali Uluhlu lweziqulatho I-Bali ngaphandle kwamathandabuzo lolona khetho lulungileyo eIndonesia.Ihotele ezininzi kuhlahlo-lwabiwo mali kwesi siqithi zifumaneka eKuta, kulapho uninzi lwabakhenkethi baya khona.Kodwa, olu luhlu luqulathe iindawo zokutyela ezibalaseleyo eBali njengoko zilinganisiwe ngabakhenkethi. egxile eNusa Dua, Seminyak naseUbud.Ihotele zeUbud kunye neeholide zifanelekile ...
24.09.2020 / Inkumbulo / Asia, Indonesia, Ukujikeleza iBali / Izimvo kwiihotele ezili-10 eziphambili eBali akukho
Uhambo lwethu oluya eBali
Uhambo lwethu lokuya eBali ngoSuku loku-1 ukufika eDenpasar malunga nentsimbi yesibini. Ihotele yethu iBali Hyatt isithumele iteksi ene-DRIVER enobuntu kakhulu kwaye sahamba saya eSanur malunga nesiqingatha seyure .. ukuya kwiBali Hyatt yethu. Ngokukhawuleza sayithanda iSanur ... kwaye ezi zindlu zintle kwaye kunjalo nemozulu entle eBali ...
11.09.2020 / ingelosi / Asia, Ukujikeleza iBali, Ukuphononongwa ngokunyaniseka / 3 izimvo kuhambo lwethu oluya eBali
26.11.2020 / Inkumbulo / Greece, Inyaniso / Izimvo Kwi-7 yeemangaliso zeGrisi yakudala akukho
Imifanekiso eqingqiweyo eyi-8 enkulu emhlabeni
Imifanekiso eqingqiweyo esi-8 ngobukhulu emhlabeni Itheyibhile yokuqulathiweyo Iifoto ezinkulu zakhiwe ukusukela kumaxesha amandulo. Eyakhelwe ngama-Egypt amandulo e-Old Kingdom, i-Great Sphinx ziimitha ezingama-20 (66,34) ukuphakama kwaye iseyeyona mifanekiso mikhulu emhlabeni. Kule minyaka ingama-30 idlulileyo, umhlaba ububonile ukwakhiwa okuphezulu nangaphezulu ...
17.10.2020 / Inkumbulo / Inyaniso / Izimvo kwi 8 eqingqiweyo inkulu ehlabathini akukho
Fumanisa imiqolomba yamandulo i-Ellora e-India
Fumanisa imiqolomba yamandulo i-Ellora e-India Iziqulatho I-Ellora Cave yenye yezona ndawo zinkulu ehlabathini, ezifumaneka kwi-30 km (20 miles) kumntla-ntshona we-Aurangabad, kufutshane nedolophana yase-Ellora e-India. Abalandeli bobuBuddha, ubuHindu nobuJainism bakha obu bunzima phakathi kwenkulungwane yesithandathu neyeshumi ...
12.10.2020 / Inkumbulo / Asia, India, Inomdla, Inyaniso / I-1 Comment Ukurekhoda Fumanisa imiqolomba yamandulo i-Ellora e-India
02.10.2020 / Inkumbulo / Belize, Inyaniso, ENyakatho Melika / I-1 Comment Ukuya kwi-10 yezoKhenketho eBelize
Iilwandle ezili-10 ezilungileyo eSpain
Uluhlu oluphezulu lwaseSpain eSpain Iziqulatho Indawo eyaziwayo yokuchitha iholide eYurophu, eSpain idume ngenkcubeko yayo etyebileyo kunye nembonakalo entle yendalo. Iilwandle zayo zinomtsalane kubakhenkethi abafuna ukuchitha ixesha lokuphumla elangeni ngeeholide zabo zasehlotyeni.Amanxweme aseSpain, anenani elibalulekileyo lamabhishi kunye neendawo ezinomhlaba, zahlukahlukene ngendlela entle ngayo. Ukusuka kwiilwandle ezixakekileyo ...
30.09.2020 / Inkumbulo / Yurophu, Inyaniso, Spain, Iilwandle, Ukuhamba ngeenxa zonke eYurophu / Izimvo kwiilwandle ezili-10 ezilungileyo eSpain akukho
Izinto ezothusayo ezi-6 eFrance
I-6 yezona ndawo zithandwayo eCreepiest eFrance Isixeko sezibane kunye ne-Eiffel Tower eyindumasi zatsala izigidi zabantu ngobuhle bazo. Ezinye zeempawu zomhlaba zaseFrance ziyaziwa ngokufanayo, kodwa kwicala elomeleleyo. Ukuba ujonge into ecaleni kwendlela ebethiweyo, ndwendwela ezinye zezinto ezibukekayo ...
29.09.2020 / Inkumbulo / Yurophu, Iindawo ze-Eerie, Inyaniso, Ukuhamba ngeenxa zonke eYurophu, France / I-1 Comment kwi-6 yezona ndawo zintle eFrance
Wonke umntu uyaxoka
Basikhohlisa kanjani ndifuna ukwabelana ngamava am okusebenzisa uphononongo lomdibanisi wehotele, kunye nenkonzo yokuHlola kukaGoogle. Nantsi indlela ebekwenzeka ngayo. Kobu busika (2020), ndabhabha ndaya eSri Lanka ndaza ndahlala apho kwihotele ebibhukishwe kwangaphambili. Ihotele ikhethwe ngononophelo ngokusekwe kuphononongo, iifoto kunye noqikelelo lweendwendwe ekucingelwa ukuba ziyinyani. Olu lwazi lufunyenwe ...
12.09.2020 / WaseRoma / Asia, без рубрики, Amahotele, Ukuphononongwa ngokunyaniseka / 6 izimvo Wonke umntu uyaxoka
Akukho zi rekhodi ezifumanekayo.
Iziqithi ezi-4 ezintle kakhulu eSporades. Grisi
Iindawo ezili-13 ezintle zeGrisi
Ezona ziqithi zihle zaseDodecanese Grisi
Iilwandle ezili-10 ezilungileyo eGrisi
Ezona ziqithi zihle zaseIonia Grisi
Izinto ezili-10 eziphezulu ezenziwayo eSantorini Greece
Ibhotwe elimangalisayo laseKnossos kwisiqithi saseCrete eGrisi
Iindawo ezili-10 ezinomdla zaseKrete Grisi
Iindawo ezili-10 ezilungileyo zeTesaloniki Grisi
Izinto ezili-10 ezithandekayo ePeloponnese Grisi
Iziqithi ezi-8 ezithandekayo kufutshane neAthene Grisi
Iindawo ezili-10 eziphezulu eMykonos Grisi
Iindawo ezili-10 ezithandwa kakhulu eCorfu Grisi
Iindawo ezili-10 ezilungileyo zeRhodes Grisi
Iindlu zoonongendi ezi-6 ezinqabileyo eMeteora Grisi
Iindawo ezili-10 ezilungileyo eMilan ElamaTaliyane
Iindawo ezili-10 eziphezulu zokufikela eGrisi
Izinto ezinomdla ezili-10 eZermatt Swizalend
Iindawo ezili-10 ezilungileyo zeBern Swizalend
Iindawo ezili-10 ezilungileyo zokundwendwela eSwitzerland
Iilwandle ezili-10 ezilungileyo eIndonesia
I-12 yeentaba-mlilo ezimangalisayo e-Indonesia
Iindawo ezi-8 ezinomdla kakhulu eIndonesia
Iindawo ezili-12 eDnipro (Dnipropetrovsk) ongafanele uziphose. Yukreyini
Izinto ezinomdla ezili-12 eRotorua Nyu Zilend
Iindawo ezili-12 eziphezulu zeAuckland Nyu Zilend
Iidolophu ezili-14 ezintle eNew Zealand
I-12 yeedolophu ezinomdla kakhulu eNew Zealand
I-8 yeentaba-mlilo ezimangalisayo eNew Zealand
Iimephu zelizwe labakhenkethi
Iimephu ezisebenzayo zamazwe ehlabathi
Sikwazisa iimephu zelizwe, ezinomtsalane kubakhenkethi kunye nezinye izinto ezinomdla nezibalulekileyo. Iimephu zinxibelelana ngokupheleleyo, ziqulathe iifoto kunye neenkcazo zomtsalane, inkxaso ukukhangela ngobuchule, ukuhlelwa kweziphumo kunye nokuhamba okupheleleyo... Iindwendwe ezibhaliswe kule ndawo zinokufikelela ekusebenzeni okuphezulu kwamakhadi- ukongeza amanqaku akho, ukuhamba, iindlela nokunye okuninzi. Kwakhona onako iimephu zesathelayithi, ukuphakama kunye neemephu zoncedo, kunye iimephu zemozulu ezisebenzayo kunye nenkxaso yokubikezela.
Imephu iyalayisha, nceda linda ...
Yonke into malunga neThailand
Iinqwelo moya zeThailand
Imephu yeMo yezulu
Yonke into malunga neSri Lanka
Imimandla kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide eSri Lanka
Imephu yemozulu yaseSri Lanka
I-Indonesia (eBali, Java)
Bali. Imephu edibeneyo yomtsalane kunye neenxweme
Java. Imephu yokusebenzisana yomtsalane kunye neenxweme
Konke malunga neVietnam
Imephu ngokubanzi yomtsalane kunye neenxweme
Imephu yeVietnam yemozulu
Imephu ngokubanzi yezinto ezinomtsalane kunye nolwandle lwaseSingapore
Imephu yemozulu eSingapore
Konke malunga neSingapore
Imephu ngokubanzi yezinto ezinomtsalane kunye nolwandle lwaseIndiya
Imephu yemozulu e-India + uqikelelo
Konke malunga neIndiya
Iingcebiso eziluncedo zabahambi. Ubomi hacks
Okuhle nokubi. Umoya, ulwandle, uloliwe, ngokuzenzekelayo ...
Ungonga njani kuhambo ngomoya
Imithetho yeZithuthi zeMoya
Ukukhetha ihotele. Iingcebiso
Siqokelela iimpahla ngokuchanekileyo
Ikhithi yoncedo lokuqala
Uxanduva lweenqwelo moya. Ukufundisisa. Inqwelo moya
Sifumana umvuzo ngohambo
IiNdawo zokuSebenza zeMali yeFoto
Amanqaku amatsha kwi-portal
14.11.2020 / Izimvo kwiihambo zoMlambo akukho
Ulwandle oluyimfihlo. I-Bias Tugel Beach eBali
26.10.2020 / Izimvo KwiLwandle olufihlakeleyo. I-Bias Tugel Beach eBali akukho
Ulwandle iSanur eBali. Indoneshiya
25.10.2020 / Izimvo KwiSanur Beach eBali. Indoneshiya akukho
Ulwandle lwePandawa eBukit. Bali
25.10.2020 / Izimvo kunxweme lwasePandawa eBukit. Bali akukho
Ulwandle lwasePadang Padang eBali. Indoneshiya
25.10.2020 / Izimvo elunxwemeni lwePadang Padang eBali. Indoneshiya akukho
Ulwandle lweMushroom. Isiqithi saseLenbongan. Bali
22.10.2020 / Izimvo kuLwandle lweMushroom. Isiqithi saseLenbongan. Bali akukho
ILembeng Beach eBali. Indoneshiya
22.10.2020 / Izimvo kunxweme lwaseLembeng eBali. Indoneshiya akukho
Isiqithi saseNusa Cheningan, eBali. Indoneshiya
Isiqithi seMenjangan eBali. Indoneshiya
Isiqithi saseNusa Lembongan. Bali. Indoneshiya
Isiqithi saseNusa Penida. Bali. Indoneshiya
IPapua New Guinea
Uhambo oluya e-honeymoon
Ukukhenketha ngesisu kunye newayini
Ukhenketho olunzulu lolwandle
Unyango kunye nokuPhila
Khangela. Umoya kunye neehotele
EMantla nakuMbindi Merika
Ubhaliso kwi-portal Journey-assist.com
Ngaba ayilixesha lethu lokuba sihambe?! ;)
Yongeza Journey-Assist Kwiskrini sakho sasekhaya!
Ukuvuka ngenye intsasa emva kokulala ngaphandle kokulala, uGregor Samsa wafumanisa ukuba ujike waba sisinambuzane esoyikekayo ebhedini yakhe.
Ukulayisha imephu, nceda ulinde ...